“Umadda Somaliland waxaanu ka dhawraynaaa,waxay Xukuumada Somaliland ku xaragoonayso”. Xoghayaha Guud Ee Xisbiga WADDANI | Duul News International
“Umadda Somaliland waxaanu ka dhawraynaaa,waxay Xukuumada Somaliland ku xaragoonayso”. Xoghayaha Guud Ee Xisbiga WADDANI	Hargaysa: (Duulnews.com)-Xoghayaha Guud ee Xisbiga Mucaaradka ah ee WADDANI,Md. Maxamed Cabdilaahi Uur-cade,ayaa sheegay in Xukuumada uu gadh-wadeenka ka yahay Madaxweyne Siilaanyo ay mudooyinkan danbe faafiso daacayo ka dhan Xisbiyada Mucaaradka Somaliland,iyada oo ku antacoota inay yihiin Xisbiyada Qaranku Somali-weyn.
Md.Uur-cade,ayaa waxa uu intaas raaciyay inay Shacabka Reer Somaliland ay u cadahay in hogaanka maanta talada dalka gacanta ku haya ay yihiin,kuwii ilaa Wakhtigii Mucaaradka ay ahaayeen lagu xaman jiray inay aaminsanyihiin Mabd’a Somali-weyn.waxaana uu intaas ku daray inay Xisbi-ahaan ay Xukuumada ka difaacayaan inay dhaxal-wareejiso Qadiyada Madax-banaanida JSL.
Xoghayaha oo Maalintii shalay ka hadlayay Shir-weynihii Dhalinyarada Heer Qaran ee Xisbiga WADDANI,ayaa waxa uu yidhi isaga oo arimahaasi ka hadlaya “Madaxtooyada Somaliland,marka Xisbiga WADDANI kalmad dhaliil ah yidhaahdo,waxay tidhaahdaa waxay ku socdaan Xamar iyo waa Somali-weyn ayay ku andacoodaan.
Anagu waxaan ognahay,Somaliland-na ogtahay cidda lagu xaman jiray Somali-weyn ilaa iyo markii ay Mucaaradka ahaayeen waxay ahayd KULMIYE,Somaliland oo dhamina wey ogtahay.
Cidda uu ka ilaalinaayo Xisbiga WADDANI inuu dadka geeyo Somali-weyn,horta waa KULMIYE.waxaana u calaamad ah oo horena dadku yaqaanay Gacmo-isa-salamaya,gacmahaasina waxay yihiin Dadkaanu u daynaynaa”.
Dhinaca kalena waxa uu Xoghayahu farta ku fiiqay cabashooyinka is-daba jooga ah ee kasoo yeedhaya Gobolada Darfayada dalka oo uu sheegay in Xukuumadu iyada oo Midida daabkeedii haysa,hadana ay tahli kari la’dahay inay wax ka qabato dhibka taagan ” Inaga oo og Goboladeenii Somaliland, ee bariga maanta halkaas waxa fadhiya Badhan ilaa Saylac,wali Xukuumadeena talada haysaa intaas isku may keenin. Markaas baan xasuustaa caalamada.maalin kasta waxaad arkaysaa Goboladii Bariga iyo Galbeedka Cabashada ka taagan ee ay qalinayaan,iyada oo waxa ay u baahan yihiin yahay,wax aan sidaas u weynayn,oo ah wax gacanta Xukuumada ku jira”.
Ugu danbayntiina waxa uu tilmaamay in dhibaatada iyo kadeedka Umadda Somaliland uu yahay xaragada iyo badhaaha Xukuumada Madaxweyne Siilaanyo. “Umadda Somaliland waxaanu ka dhawraynaaa,waxay Xukuumada Somaliland ku xaragoonayso. Xukuumada Somaliland waxay hadda ka dhigatay olole ay Doorasho iyo Cod ku hesho,oo ay Umadda ku jahawareeriso in labada Xisbi Mucaarad ay yihiin kuwo Somali-weyn ah,afarta Madaxtooyada Joogaana ay yihiin kuwo Somaliland ah”.
“Xeerkii Tijaabada Ahaa Ee Madaxtooyada Lagu Hoos Geeyay Dhismaha Waddooyinku Waa Uu Muddo Dhaafay, Qaadhaan Bixiyeyaashuna Hadda Waa Ay ka gows-adaygeen Maalgalintiisa.”.Xildhibaan aw-Xoog
Ururka Saxafiyiinta Ee SECJA oo Shir Ugu Yeedhay Warbaahinta Xorta Ah Iyo Saxafiyiin Tira Badan Oo Ku Qulqulaya Berbera. -
Madaxweyne Siilaanyo Oo Xukuumadiisa Isku Shaandheeyay.